Ii -apps ezi-4 zekhamera ezenza ulawulo lwencwadi kwi-lollipop ye-android
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ii -apps zekhamera ezi-4 ezenza ulawulo lwencwadi kwi-Android Lollipop
Ii -apps zekhamera ezi-4 ezenza ulawulo lwencwadi kwi-Android Lollipop
Kunyaka ophelileyo, xa uGoogle wasungula i-Android Lollipop, ikwakhupha i-API entsha yekhamera (inkqubo yenkqubo yesicelo) ebonelela ngenkxaso kuseto lwekhamera. Oku, nangona kunjalo, akuthethi ukuba zonke izixhobo zeLollipop zifumana ulawulo lwekhamera olusebenzayo ngokwendalo. Endaweni yoko, oko kuthetha ukuba banokuthatha ithuba lokusebenzisa ii -apps zekhamera ezitsha ezenzelwe ngokukodwa ukubonelela ngokuseta ngesandla.
Okwangoku, azikho ii-aps; zininzi kakhulu ii -apps zomntu wesithathu ezibonisa ulawulo lwekhamera, kodwa ezo ziyenzayo kufanelekile ukuba uziqwalasele ukuba ufuna ukulawula ngcono ifowuni yakho ye-Android & apos; s, okanye itablet & apos; s camera.
Ewe, izixhobo ezahlukileyo ezisekwe kwiLollipop- njenge LG G4 - sele unikeze ezinye ulawulo lwekhamera yesandla . Nangona kunjalo, kwimeko yabo, ukuzama usetyenziso lwekhamera eyahlukileyo kunaleyo i-apos efakelweyo kwangaphambili kunokuba mnandi. Kwaye ezinye zeapps ezichazwe apha ngezantsi mazithathe iifoto zeRAW-into enqabileyo kwisithuba se-smartphone.
Ngaphambi kokucwangcisa ukufumana naluphi na usetyenziso oludweliswe apha ngezantsi, kuya kufuneka uqale ujonge ukuba isixhobo sakho seLollipop se-Android siyaluxhasa ulawulo lwencwadi. Ukwenza njalo, kuya kufuneka ukhuphele usetyenziso lweKhamera yokuNgqinelana nokuhambelana ( Google Play ikhonkco ) simahla kwaye uyiqhube kwisixhobo sakho. Iya kukuxelela ukuba zeziphi iisetingi zekhamera yesandla ezi-okanye ezingasekelwanga.
Le app & apos; igama licacile njengokuba lifika, kuba linokujika ifowuni yakho ye-Android kunye ne-apos; s snapper kwikhamera egcweleyo. Ngokwazi kwethu, ibiyiyo le insiza yokuqala yokusebenzisa i-Android Lollipop kunye neapos; s API yekhamera entsha . Iimpawu zayo eziphambili zibandakanya isantya sokuvala ngesandla, i-ISO yemanyuwali, umgama ekugxilwe kuwo ngesandla, ibhalansi emhlophe ebhalwe ngesandla, imbuyekezo yokuchazwa ngesandla, kunye nokukwazi ukudubula iifoto zeRAW (DNG). Ikhamera yemanuwali ikwakhona ngokukhawuleza, ngenxa yoko ungabamba ngokukhawuleza ixesha njengoko lisenzeka.
Khuphela ($ 2.99).
Ikhamera ye-FV-5 sesinye isicelo esibonelela ngenkxaso ye-RAW (DNG) yokufota, ukongeza kuninzi lwezicwangciso zesikhokelo: i-ISO, ukugxila, ukubhengeza, isantya se-shutter, njalo njalo. Ikhamera ye-FV-5 ikwabonisa 'i-DSLR-efana nesibonisi sokubonisa' esenza ukuba ubone izinto ezifana nexesha lokuvezwa kunye nokuvula ngexesha langempela. Ngelixa i-Camera FV-5 yinkqubo ehlawulelweyo, ungazama uguqulelo lwayo lweLite simahla (oku, nangona kunjalo, kuthintela ukusonjululwa kweefoto, kwaye ayiniki inkxaso yeRAW).
Khuphela: Ikhamera FV-5, igcwele ($ 3.95), Ikhamera ye-FV-5 Lite (simahla).
Ikhamera engcono ibonelela ngenkxaso yokufota i-RAW, nayo, kodwa kujongeka ngathi okwangoku kunqunyelwe kwiGoogle Nexus 5 kuphela. Ngayiphi na imeko, nangaphandle kwenkxaso yeRAW, usetyenziso lunezinto ezininzi eziluncedo, kubandakanya ukugxila kwesikhokelo, isantya se-shutter ngesandla, kunye nebhalansi emhlophe ebhalwe ngesandla. Insiza inokuthatha iipanorama ezingama-360 ukuya kuthi ga kwi-100 MP.
Khuphela (simahla, ngokuthenga ngaphakathi nohlelo).
Ikhamera evulekileyo ibizwa ngoluhlobo kuba i-apos simahla (akukho kuthengwa ngaphakathi nohlelo apha). Ayinikezeli ngenkxaso yeRAW, kodwa iiapos zinezinto ezintle, ezinje ngomgama wokugxila kwincwadana, ixesha lokuveza ngesandla, kunye ne-ISO yemanyuwali. Insiza iyaqhubeka inika ukhetho lokuzinzisa ngokuzenzekelayo-ngale ndlela, iifoto zakho 'zikwinqanaba eligqibeleleyo, nokuba kwenzeka ntoni.'
Eyona mils ye-mms ye-Android 2015
I-s21 ultra vs s10 kunye
ii-metro pcs zte zmax khumbula
Isakhelo soVavanyo lweNtsebenzo kunye neGatling neMaven
Idlalwa njani i-NES, SNES, Sega Genesis imidlalo kwi-smartphone yakho ye-Android
I-T-Mobile kunye ne-Sprint & apos; imephu yokugubungela emva kokuvunywa kokudityaniswa kuya kujongeka njengoku
Fumana isibini seendlebe zokucima ingxolo yakwaSony ngexabiso lesiqingatha
I-Apple Watch Series 6 ukubeka esweni ioksijini yegazi: isebenza njani kwaye uyisebenzisa njani?
I-LG Stylo 6 isungula ngokusesikweni kwi-Boost Mobile
Uhlaziyo lwe-LG G2 Android 5.0 Lollipop luphuma ngaphandle
IAmazon ityhila i-Echo, i-Echo Dot, kunye ne-Echo Show 10 enamaxabiso aphezulu